Chọpụta ihe ị ga-ahụ na obodo Warsaw | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Warsaw
Susana Garcia | | Ebe njegharị, Getaways Europe, General, Poland
Warsaw, isi obodo Poland, bụ obodo nke dakwasịrị oge dị egwu n'akụkọ ihe mere eme ya, ọkachasị n'oge Agha Worldwa nke Abụọ. Akụkọ banyere Warsaw Ghetto maara onye ọ bụla, agbanyeghị na obodo ahụ jisiri ike si na ntụ ya bilie wee bụrụ ebe nwere ọtụtụ ebe ndị njem nleta.
Ọ bụrụ na anyị gaa gaa na obodo Warsaw, anyị pụrụ ịnụ ụtọ a mara mma ochie obodo, imerime ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na ọtụtụ jụụ ogige ntụrụndụ na-ezu ike. Ọ bụ obodo na-anabata ma na-adọrọ mmasị nke nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye ndị kpebiri ịga leta ya.
1 Obí nke Omenala na Sayensị
2 Ngosi ihe mgbe ochie na Warsaw
2.1 POLIN Museum nke akụkọ ihe mere eme nke ndị Juu Poland
2.2 Pinlọ Chopin
2.3 Awlọ ihe ngosi nka nke Warsaw
3 Ogige ntụrụndụ na Warsaw
3.1 Ogige Ujazdów
3.2 Ogige Skaryszewski
3.3 Ogige Lazienki
4 Obodo Ochie
5 Ghetto Warsaw
6 Castlọ Royal
7 Sịkọl ndị Juu
Obí nke Omenala na Sayensị
Imlọ a na-adọrọ adọrọ Ọ bụ nke kasị elu na Poland, nke nwere ala 42 na mita 237 dị elu. N’ime e nwere ọtụtụ azụmaahịa na ọfịs, mana enwere ike ileta ya n’ihi na o nwere ọtụtụ karịa. N'ime ya enwere ọtụtụ ihe ngosi nka, cinemas abụọ na mahadum abụọ. Na mgbakwunye, i kwesịghị ileghara nnukwu echiche anyị nwere ike ịnweta obodo niile site na ala elu. Ekwesiri ighota na ulo a bu onyinye sitere na Stalin nye ndi Polish na 1955 ma buru otutu esemokwu n'ihi oke ya, otutu ndi mmadu na-asi ya.
Ngosi ihe mgbe ochie na Warsaw
Ọ bụrụ na e nwere ihe anyị nwere ike ịnụ ụtọ na obodo Warsaw, ọ bụ nnukwu ọdịbendị, nke gosipụtara na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ebe ngosi ihe mgbe ochie ileta, ụfọdụ n'ime ha raara onwe ha nye oge kachasị njọ n'akụkọ ihe mere eme ya. N'ihi mkpa nke ihe ndị mere eme n'obodo, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu ka ị gaa ụfọdụ n'ime ihe ngosi nka ndị a.
POLIN Museum nke akụkọ ihe mere eme nke ndị Juu Poland
Emeghe na 2013, a na-arara Polin ahụ kpọmkwem nye ndị Juu Poland, nke biri n'oge ọchịchịrị n'oge ọchịchị Nazi. N'ime ụlọ ihe ngosi nka anyị nwere ike ịmụtakwu ntakịrị banyere ha na akụkọ ihe mere eme nke Warsaw Ghetto. Ọ dị n'ime ụlọ mara mma ma obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime nleta dị mkpa na obodo ahụ iji mụtakwuo banyere akụkọ ọjọọ ahụ.
Muselọ ihe ngosi nka a bụ raara nye onye egwu egwu Chopin, na-eme ka ọ bụrụ nleta kachasị mma maka ndị na-egwu egwu egwu. Muselọ ihe ngosi nka nwere ime ụlọ iri na ise nke anyị ga-ahụ ihe odide, ihe ndị a na-eme kwa ụbọchị na ihe ndị ọzọ gbasara Chopin.
Awlọ ihe ngosi nka nke Warsaw
Muselọ ihe ngosi nka a na-akọkwa akụkọ banyere obodo ahụ, ebe ọ bụ na a raara ya nye Ọgba aghara Warsaw megide ndị Nazi na 1944. N’ebe ngosi ihe mgbe ochie enwere ụdị ihe na mpempe dị iche iche na-echeta ọgba aghara a, nke ọtụtụ narị mmadụ nwụrụ. Na mgbakwunye, enwere ike ịhụ akwụkwọ eserese iji nweta echiche nke oge akụkọ ihe mere eme ga-abụrịrị.
Ogige ntụrụndụ na Warsaw
Warsaw bụ jụụ na nnọọ green obodo, nke mere na n'ime ya anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ogige ntụrụndụ nke mmasị, nke mebere ọmarịcha foto. Ogige ndị a bụ ezigbo ebe izu ike n'etiti etiti okike ọbụlagodi na obodo. Yabụ anyị ga-ebinye aka na ha ka anyị kwụsị n'ụzọ ma nwee obi iru ala.
Ogige a bụ otu n’ime ndị a kacha elekọta n’ime obodo, nwere ezigbo mara mma iji nwee obi ụtọ dị ka ezinụlọ, di na nwunye ma ọ bụ ndị enyi. Ọ bụrụ na anyị na ụmụaka aga, ọ bụ ebe kachasị mma, ebe ha nwekwara ebe a kapịrị ọnụ ka ha nwee ike igwu egwu n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ọ bụ ebe zuru oke iji see foto ma nwee obi ụtọ na etiti obodo.
Ogige ntụrụndụ ọzọ anyị pụrụ ịchọta n’obodo Warsaw bụ Skaryszewski, n’akụkụ osimiri Vistula. Ogige a nwere ọdọ nke ya, nke a na-akpọ Kamionkowskie, nke iji gbazite ụgbọ mmiri iji nwee ọ aụ oge ịhụnanya. N’ogige ahụ, e nwekwara obere ihe egwuregwu ebe a na-eme ihe mgbe ụfọdụ.
Nke a bụ ebe kachasị acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na Warsaw niile na ọ bụ ogige nke meghere na narị afọ nke iri na asaa, nwere ụlọ ịsa ahụ. N'ime ogige ị nwere ike ịhụ ihe ncheta nke Chopin, yana Belvedere Palace ma ọ bụ White House.
Nke a bụ mpaghara a ga-agarịrị, ọ bụ ezie na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ bibiri na WWII. O jisiri ike ịmaliteghachi ma ghọọ Ebe Nketa Worldwa, yana ịbụ otu n'ime ebe ndị njem nleta na ebe ndị na-adọrọ mmasị.
Ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị gịnị bụ Warsaw Ghetto, Ọ ga-ekwe omume ịme njem nlegharị anya iji hụ ihe ncheta ndị ka na-adịgide ndụ site n'oge a gbara ọchịchịrị nke obodo ahụ. Ọ ka mma ịkpọtụrụ nleta ndị a ma ọ bụ gaa na ụlọ ọrụ ndị njem nleta na-achọ ihe ọmụma, iji nwee ike ịchọta ihe ncheta ndị ahụ ka na-adị ndụ n'obodo ahụ.
Taa Royal Castle bụ oche nke Ntọala Polish maka akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị. Ọ bụ n'ụdị baroque na neoclassical na na nnukwu ụlọ a ka ụlọ elu elekere na-apụta na eziokwu ahụ bụ na n'ime ị ga-ahụ ọrụ abụọ site na onye na-ese ihe Rembrandt.
Sịkọl ndị Juu
Ebe a na-eli ozu bụ akụkụ nke ghetto ma bụrụ a ebe akụkọ ihe mere eme nke ka na-arụ ọrụ taa. Ebe enwere otutu ili na oke ili. Ọ bara uru ileta maka ịbụ akụkụ nke akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Warsaw